भिडियो::Nepal's Digital Paper
कमला घिमिरेलाई ल्याएर चर्चामा आएका अमृत सापकोटा को श्रीमती झनै मिठो गाउने गायिका हुन।उनि खासै मिडियामा आए पनि अमृतको नाम लिएर भने आइनन् एक्कासी अमृत सहितको नाम जोडेर उनि मिडियामा आएपछि अहिले सुनिता बागदास...
आज भन्दा ठ्याक्कै १ बर्ष अगाडी यही स्टुडियोमा धना परियार आएकी थिइन उनि निकै नाजुक अबस्थामा आए पछि हामीले धनलाई सहयोग गरेका पनि थियौं।उनको उपचार र सांगीतिक यात्रा दुबैलाई सहज हाम्रै टिमबाट भएको हो...
इन्द्रेणीमा नाचेर भाइरल भएकी सम्प्रिया खड्का पहिलोपटक मिडियामा आएकी छिन।उनि पहिलोपटकनै भाबुक हुदै मिडियामा आएकी हुन्।उनि आफ्नो भगवान नै कृष्ण कंडेललाइ मान्छिन।गाउँमा हुर्केकी सम्प्रियाले कहिल्यै इन्द्रेणी हेरेकी रहिनछिन।अकस्मात कंडेलको टिम पुगेपछि हौसला मिलेछ।उनको डान्स...
नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रका चर्चित गायक मेक्सम खाती र उनका दाई नरेश खाती एकसाथ मिडियामा आएका छन।सानु कहाँ छौ गीतबाट एकाएक चर्चामा आएका मेक्सम खातीको दाजु भाईको जोडी निकै रुचाउछन आम दर्शक श्रोतले जसको...
कमल सरगमको उत्कृष्ट लय सृजना भित्र बाल कुमार श्रेष्ट र पूर्णकला बिसिको आवाजमा तिहार गित”देउसी रे”सार्वजनिक
काठमाडौंः नेपालीहरुको महान चाड दशैँ तथा तिहारको शुभकामना सहित सपना सुनार फुच्ची र इश्वर गुरुङको देउसी भैलो तिहार गित घरबेटी बा २ ”देउसी रे”सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समयका युवा पुस्तालाई मध्यानजर गर्दै प्रस्तुत...
रवि लामिछानेका समर्थक र प्रहरीविच दोहोरो झडप दर्जन भन्दा बढी घाईते-चितवन पुगेर ज्ञानेन्द्र शाहीले यतिसम्म भने(भिडियो)
चितवन । पत्रकार रवि लामिछानेका समर्थक र प्रहरीविच दोहोरो झडप हुँदा डेढ दर्जनबढी घाईते भएका छन । झडपका क्रममा एक जना असईसहित ७ जना प्रहरी र एक दर्जन प्रदर्शनकारी पनि घाईते भएको प्रहरीले जनाएको...
पत्रकार पुडासैनीको मृत्युमाथि आरोप लागेपछि रवि लामिछानेले दिए स्पष्टिकरण (भिडियो)
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु आत्महत्या दुरुत्साहनबाट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । मृत्युअघि उनले रेकर्ड गरेको भिडियोमा केही मानिसका कारण आफू आत्महत्या गर्न लागेको उल्लेख भएको जनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी...
पशुपति शर्मा र सिता श्रेष्ठले गाएको तीज गीत रातारात भाइरल-भिडियो
तीज भन्दा साथ लोकप्रिय गायक पशुपति शर्माको नाम सबैलाई आउछ । आउन पनि किन नआओस उनका हरेक तीजमा उत्कृष्ट गीतहरु सार्वजनिक हुन्छन र मन छुने गर्दछन् । यो बर्ष पनि शर्माको यो भन्दा पहिला एउटा...
विश्वमा अश्लील भिडियो हेर्नेहरु ९० प्रतिशतभन्दामा बढी, तपाईंले हेर्ने अश्लील भिडियोको निगरानी फेसबुक र गुगलले यसरी राख्छ निगरानी !
काठमाडौँ । तपाईं ‘इन्कोग्निटो’ मोडको प्रयोग गरेर अश्लील भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ ? यदी हेर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई फेसबुक र गुगलले उच्च निगरानीमा राखेको छ ।ल्याप्टप वा स्मार्टफोनमा ’इन्कग्निटो मोड’ स्विच गर्दासमेत तपाईंले हेर्ने अश्लील...